Semalt Explained Sida loo xalliyo Spam Referrers
Helitaanka gaadiid ku filan waxay noqon kartaa riyooyin xaqiiq ah oo laga helo barta internetka oo dhan. Natiijo ahaan,dadku waxay u shaqeeyaan habab kala duwan si ay u helaan taraafikada internetka Internetku waa kheyraad ballaaran oo ka dhigi kara website inuu helo dad badan oo booqanayalaga bilaabo geesaha kala duwan ee adduunka. Website-yo badan oo guuleysta waxay yaqaanaan awoodda suuq-geynta onlineka. Waxay shaqaaleeyaan wakaaladaha SEO si ay u qabtaan qaarfarsamooyinka suuqgeynta ee dijital ah sida suuq geynta. Qaar kale waxay leeyihiin guulo badan oo dib loogu soo celiyo iyagoo isticmaalaya Suuqa Warbaahinta(SMM). Sidaa awgeed, waa lagama maarmaan in la shaqaaleeyo farsamooyinka suuq-galinta ee ku habboon ee ku habboon shabakadahaas oo ugu guuleysto - programa para criar saite. RaadiOptimization engine (SEO) isku daraa habab kala duwan si ay ula yimaadaan istaraatijiyad waxtar leh suuq-geynta online. Waxay kor u qaadi kartaa dhammaanbahababka kale sida dib u qabsiga iyo helitaanka gudbinta.
Si kastaba ha ahaatee, Michael Brown, Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka, wuxuu jeclaan lahaa inuu ku xasuusiyo in qaar ka mid ah spamka ay sidoo kale habab badan u helayaan inta u dhaxaysa shaqada digitalmarkasta iyo ujeedooyinkooda. Xawaaraha farriinta badani waxay isticmaalaan farsamooyinka sida booqashooyinka bogga fake si ay u soo jiidaan dadweynaha si ay u gujiyaan isku xidhka xiriirka ah ee suurtagalka ahshabakadaha khatarta ah. Xaaladaha kale, spam waxaa ka mid ah Trojans iyo cyberware oo ku jira fayraska ama lambarka gudahood falalkooda talaabo-tallaabo-qaadasho amaqaar ka mid ah lifaaqyada ay ku dhiirigeliyaan dhibanaha inay gujiyaan. Xaaladaha badankood, waxaad la kulmi kartaa gaadiid badan oo ku jira Google Analytics.Si kastaba ha noqotee, ganacsigani maaha inuu ka tarjumo dashboardkaaga ama qalabka kale, kaas oo falanqeynaya waxqabadka bogaggaaga. Tusaale wanaagsan waakuwaas oo xiriirinta gudbinta, kuwaas oo ka yimid Darodar.Com. Waxaad ka baxsan kartaa cadhada weerarada noocaas ah iyo in badan oo intaa ka badan isticmaal farsamooyinka qodobkan..
Sidee loo xakameyn karaa isdhexgalka spam?
Waxaa jira baahi weyn oo looga hortagi karo qaar ka mid ah gudbinta spam isku dayaya inay la xiriiraanbloggaaga. Qiyaastani waxay xaqiijin kartaa badbaadinta shabakaddaada iyo sidoo kale heysashada akhristayaasha ka fog dhagaystayaashaada. Websaydhada intooda badani way hilib yihiintallaabo ku saabsan guddiga maamulka. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah xarig-xayeysiis ah guddi-hoosaadkaaga iyo sidoo kale Google Analytics. Waxaa sidoo kale jirasifooyinka spam ee badan oo loogu talagalay dadka isticmaala internetka iyo dadka kale ee daneynaya inay sameeyaan maaraynta internetka oo ammaan ah. Filtarrooyinkan,waxaa lagama maarmaan ah in laga tago shaandhee meel aad ka arki karto fariimo muhiim ah. Filterska ayaa arki kara qaar ka mid ah emailada macquulka ah sida spam. Ugu dambeyntii,abuurista wacyi-gelinta dadkaaga waxay noqon kartaa qiyaas wanaagsan. Hadafkani wuxuu yareyn karaa weerarada spam ee dhabarka dambe. Kuwaas waxaa ku jiri kara kuwakhaniisyada ujooga cinwaanka emailka macmiilka si ay u xadaan sirta.
Barta internetka ama shabakadda internetka e-commerce waxay ubaahantahay taraafik. Natiijo ahaan, waxaa jirafarsamooyin farsamoyin badan oo online, kuwaas oo keeni kara taraafikada goobtaada. Qaar ka mid ah hababkaasi waxay ku shaqeeyaan xeeladaha khadadka cad marka ay kuwa kale isticmaalaanxeeladaha mugdiga madow. Xaaladaha badankood, shirkadaha waxay isticmaalaan hababka kumbuyuutarrada sida kumbuyuutarka, SEO iyo sidoo kale suuq-geynta warbaahinta bulshada. Gudbintasocodka gaadiidka ayaa qayb ka ah macaamiisha badalaya. Si kastaba ha noqotee, marka ay ka timaaddo xawilaadda spam, waxay kuugu kici kartaa dadaalka SEO sidaiyo sidoo kale arrimo badan sida hanjabaad internetka ah. Waxaad ka hortagi kartaa gudbinta spam sida forumyada darodar.com iyo inta badan isticmaalka tilmaamahan. Intaa waxaa dheer,tilmaan-bixiyahan ayaa kaa caawin kara inaad ilaaliso ammaankaaga iyo tarbiyeyaasha internetka.